soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha mashiinka mesh silig laba geesoodka ah. Shiinaha Mashiinka mesh silig laba geesood ah Factory
Waxyaabaheena ugu muhiimsan waa: mashiinka mesh silig ee mesh laba geesoodka ah ee qalooca, mashiinka mesh siligga mashiinka mesh siligga ah ee wanaagsan iyo midka xun, CNC mashiinka mesh siligga mashiinka mesh siligga ah ee toosan iyo midka xun, mashiinka mesh siligga ah ee jiifka culus, mashiinka mesh silig culus ee adag, silsiladda isku xidhka mashiinka siligga, mashiinka mesh mesh silig, mashiinka sawirka siligga iyo taxane ah alaabada makiinadaha mesh silig.
Mashiinka Mashiinka Yar
Mashiinka xayndaabka silsiladda isku xidha
Mashiinka Mesh Mashiinka Wareegtada ah ee Laba-geesoodka ah ee mesh siligga laba-geesoodka ah waa mesh silig ka samaysan mesh silig googo'an (laba-geesood) oo laga tolay fiilooyin bir ah. Dhexroorka siligga la isticmaalay ayaa ku kala duwan hadba cabirka mesh siligga laba geesoodka ah. Shabakado yar-yar oo laba geesleyaal ah oo leh lakabyo bir ah oo galvanized ah ayaa badanaa isticmaala fiilooyin bir ah oo dhexroorkiisu yahay 0.4-2.0 mm, halka shabaqyada leh lakabka PVC ay badanaa isticmaalaan fiilooyinka biraha PVC ee dhexroorkoodu yahay 0.8-2.0 mm. Noocan shabakada laba geesoodka ah waxaa si weyn loogu adeegsadaa shabaqa go'doonka beeraha ...
Mashiinka Mesh-ka Laba-geesoodka ah ee Mesh-laba-geesoodka ah waa mesh silig ka samaysan mesh silig ah (hexagonal) oo laga tolay fiilooyin bir ah. Dhexroorka siligga la isticmaalay ayaa ku kala duwan hadba cabirka mesh siligga laba geesoodka ah. Shabakado yaryar oo laba-geesood leh oo leh lakabyo bir ah oo galvanized ah ayaa badanaa isticmaala fiilooyin bir ah oo dhexroorkeedu yahay 0.4-2.0 mm, kuwa kuwa leh lakabka PVC-na waxay badanaa isticmaalaan fiilooyinka biraha ee PVC oo dhexroorkoodu yahay 0.8-2.0 mm. Noocan shabakada laba geesoodka ah waxaa si weyn loogu isticmaalaa shabakada go'doominta dhul beereedka, daaqa fenc ...